Ireo rehetra ireo no smartwatches miaraka amin'ny Android Wear izay havaozina amin'ny Wear OS | Androidsis
Andro vitsy lasa izay dia nanako vaovao iray izay nandre izany Nikasa ny hanova ny anaran'ny rafitra fiasan'izy io ho an'ny smartfy Android Wear ho lasa OS i Google, manandrana manavaka azy amin'ny Android, satria ireo modely rehetra ireo dia mifanaraka amin'ny terminal Apple, amin'ny alàlan'ny fampiharana mifanentana antsoina hoe Android Wear, izay amin'ny fanavaozana manaraka dia hatao hoe Wear OS.
Efa tonga ny fanovana ary manomboka amin'ity fotoana ity, Android Wear dia ho hita amin'ireo terminal rehetra izay tsy havaozina amin'ny Wear OS avy amin'i Google. Raha manana smartwatch tantanan'ny Android Wear 2.x ianao dia asehonay anao ny lisitra iray anehoana azy ireo ny maodely smartwatch rehetra havaozina amin'ny Wear OS 1.0 Amin'ny herinandro manaraka.
Google dia miantoka fa tsy ho ela dia handefa fanavaozana fanampiny ho an'ny mpampiasa iOS, mpampiasa izay indrisy fa tsy afaka manararaotra feno ireo terminal ireo, noho ny fameperana nataon'i Apple momba an'io. Ny zava-baovao atolotray ho an'ny iOS dia ny fahafaha-manao manara-maso hetsika ara-batana amin'ny alàlan'ny Google Fit.
Manaova smartwatches mifanaraka amin'ny OS
Fosily Q Venture
Fihaonana an-tampon'ny Montblanc
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ireo dia smartwatches Android Wear rehetra izay havaozina ho Wear OS